Waxaan ku raacsanahay inaan qandaraas koronto ku heli doono RED SEA ENERGY AS. Waxaan akhriyey shuruudaha iyo asturnaanta . Waan ku raacsanahay in heshiiskan awooddu yahay SPOT. Waxaan sidoo kale ogolahay inaan bixiyo laga bilaabo NOK 19-49 bishii, iyo 3-7 øre / kWh bishii oo la isticmaalay kWh. Ma jiraan ajuuro kale oo khidmad ah.